Home Wararka Dibada Guurka & Islaamka: Dood ka taagan macnaha Aayadda guursiga xaasaska badan
Guurka & Islaamka: Dood ka taagan macnaha Aayadda guursiga xaasaska badan
Mid ka mid ah barafasoorrada jaamacadda Azhar ayaa sheegay hadal muran badan dhaliyay oo ku saabsan guursiga xaasas badan iyo waxa ay shareecadu ka qabto. Barafasoorka oo dhiga fiqiga ayaa hadalkiisa wuxuu sababay caro iyo jawaab-celinno la isla qaaday baraha bulshada iyo in ay jaamacaddu bayaan ka soo daabacdo. Haddaba maxay arrintu ku saabsan tahay?
Muxuu yiri Dr. Kariima?
Kariima ayaa wareysi siiyay telefishin laga leeyahay Masar. “Afada koowaad waa inay ninka ku caawiso inuu guursado xaas labaad, haddii uu doonayo inuu naftiisa ilaaliyo si uusan ugu kicin falal anshax-xumo,” ayuu yidhi.
Wuxuu hadalkiisa ku sii daray “in xaaska koowaad oggolaanshaheeda, ka hor inta aanu guursan midda labaad aan lagu xusin shareecada Islaamka.”
Faahfaahinta Oggolaanshaha Guurka xaasas badan
BBC ayaa si ay arrinta u kala caddeyso isku dayday in ay la hadasho Dr. Axmed Kariima. Wuxuu sheegay in arrinta uu ka hadlay ay saxaafadda ku degdegtay iyadoo aan si fiican u fahmin.
Wuxuu yiri: “Ugu horreyntii, kama hadlin in la guursado xaasas badan, “ma jirto rabitaan ama cabsi”, laakiin waxaa la i weydiiyay … ka warran haddii uu ninku u socdaalo arrimo cilmi ama diblomaasiyadeed dhowr sano? Wuxuu u baahday inuu mar labaad guursado, xaaskiisa ayuuna la soo xiriiray. Markaas ayaan ku jawaabay haddii uu guursado, waxaan xaaska koowaad u soo jeedinayaa in aysan diidin.”
Wuxuu ku taliyay in ay wanaagsan tahay ninku inuu dib ugu safro halka ay joogto xaaskiisa afartii biloodba mar.
Mar kale ayaa la waydiiyay ka warran haddii ay duruuftu diideyso arrintaas? Wuxuu ku jawaabay aayadda Qur’aanka ah: “Guurso inta dumar ah ee aad doonto, labo ama saddex ama afar.”
Dr. Kariima ayaa wax uu ugu yeeray “Ururrada haweenka ee leh ujeeddooyinka gaarka ah ee ka dhanka ah diinta” in ay ka dambeeyaan weerarrada lagu soo qaaday.
Jawaabta ‘Codka Al-Azhar’
Hase yeeshee, saacado kaddib hadalka Kariima, wargeyska ‘Codka Al-Azhar’ ee ay leedahay jaamacadda Azhar ayaa boggiisa Facebook ku daabacay hadallo uu horay u jeediyay Dr. Axmed Dayib, oo ah Sheekha Al-Azhar, oo ku saabsan guurka iyo arrinta xaasaska badan, kaas oo uu ku yiri “hal xaas ayaa ku filan [ninka].”
Dr. Axmed Dayib ayaa xaqiijiyay in ninka Muslimka ah uusan xor u ahayn xitaa guursiga xaaska koowaad, ayna tahay arrin xaddidan oo shuruudo ay ku xiran yihiin. “Way qaldan yihiin kuwa yiraahda Islaamka asalka ah waa guursiga xaasas badan, arrintuna waxay markhaati ka tahay caddaalad-darrada haweenka iyo carruurta marar badan.”
Sheekha Al-Azhar waxa uu Muslimiinta kula taliyay in ay dib u akhriyaan Aayadda ka hadleysa guursiga xaasaska badan oo dhamaystiran, ayna u fiirsadaan billow iyo dhamaad. Isagoo carrabka ku adkeeyay “in guursiga xaasas badan uu ninku xaq u leeyahay, balse uu yahay “xaq xaddidan”.
Wuxuu tilmaamay in guursiga haween badan uu yahay arrin ku xiran caddaalad, haddii la waayana uu xaaraan noqonayo, isagoo tusaale u soo qaatay aayadda qeybteeda: “Haddii aad ka cabsataan in aadan caddaalad sameyn karin, mid keliya [ayaad guursan kartaan].”
Sharciga iyo guursiga xaaska labaad
Bayaan gaar ah oo arritan uu uga hadlayo ayuu BBC-da siiyay Dr. Cabbaas Shoman, oo ah kormeeraha Guddiga Fatwada ee Al-Azhar. Wuxuu sheegay in guursiga xaas labaad ama xaasas uu xalaal yahay, cid diidi kartana aysan jirin, ayna tahay arrin uu caddeeyay Qur’aanka.
Wadaaddo fasaxaya in wakhti yar la is qabi karo
“Laakiin guurkan sharciga ah waa in la fahmo qaabkiisa saxda ah,” ayuu yiri. “Dadka intiisa badan duruuftooda darteed uma bannaana inay oori kale guursadaan wakhtigan aynu joogno. Ninka ku dhibtoon gudashada xaqa hal naag, sidee buu u guursadaa mid labaad, saddexaad, ama afraad?”
Falcelinta Baraha Bulshada ee internetka
Hadalka Dr. Kariima ayaa sababay falcelin xoog leh oo dhanka bogagga ay bulshadu ku xiriirto ee internetka ah. Dadka ka hadlay waxay isugu jiraan qaar diiddan aragtida guursiga xaasas badan, qaar u arka inay arrintaas wax u dhimeyso qoysaska iyo qaar taageersan oo u arka arrin ay banneeyeen diinta Islaamka, Sunnada iyo Fiqiga.
الله لم يُشرِّع التعدد لمصلحة الرجل أنما جاء لمصلحة المرأة بالدرجة الأولى وحفظًا لكرامتها بألا يدخل زوجها في الزناا، ولا يُعد خيانة كما يوصمه البعض، والتعدد له حيثياته وشروطه وأن يتخد بعضهم التعدد للإمتاع فهذا لا علاقة له بالتعدد المذكور بطهره ولا استئذان في قرآن.☝️😎
— Maha Bilal (@Maha_8_bilal) May 24, 2022
Kooxda taageertay Kariima waxay aaminsan yihiin in “guurka labaad uu yahay mid bannaan oo aanu shaki ku jirin oo xurmo leh.
والله خربت ع الااااخر
ده كلام برضو يا شيخنا🤔 pic.twitter.com/iXJ2qMhXvY
— 💖NeRمin🌻🦋 Elsabbaغ(noوna)🇪🇬💖 (@ElsabaghNermin) May 24, 2022
Halka tiro aad u badan oo qoraallo soo dhigay Twitter-ka ay caro ka muujiyeen, iyaga oo ku doodaya in soo-jeedinta ah in xaasaska ay raggooda ku caawiyaan ay mar kale guursadaan ay tahay cadaalad-darro weyn iyo oo aan u qalmin haweenka.
Heba Kamaal ayaa weydiisay: “Waxaa laga yaabaa in ay haweeneyda ninka ku kaalmeyso dhaqaalaha nolosha, ee sidee ayay uga caawin kartaa inuu guursado mid kale?”
Qaar kale ayaa fatwada ka soo qaaday majaajilo, iyagoo ku taliyay in la ixtiraamo dareenka bani’aadannimo ee haweenka.
Previous article5 ka mid madaxda hay’adaha sirdoonka ugu awoodda badan iyo qaabka lagu soo xulay
Next articleShaxdii Ugu Xumayd Xilli Ciyaareedka Horyaalka Premier League Oo La Soo Saaray.